Mwoyo Mesh Yakagadzirwa "# 1 Amai" Pendant (14K) - Popular Jewelry
Mwoyo Mesh Yakagadzirwa "# 1 Amai" Pendant (14K)
Simbi Inokosha: 14 Karat Yero Goridhe
Kureba: 23.5 mm * (Kusanganisira Bail)
Upamhi: 19.3 mm *
Kurema: 1.8 gramu *
* Zvese zviyero uye zviyero zvakaenzana.
Tichifunga nezvekuti zvese zvakanaka zvishongo zvesimbi zvakapfava uye zvinowumbika, zvinotevera kuti goridhe nesirivha zvishongo zvinofanirwa kupfekwa uye kubatwa nehanya kwazvo. Izvi zvinonyanya kuitika kune zvidete, zvidimbu zvidimbu zvezvishongo zvakanaka, izvo zviri nyore kubata kurwa kupfuura vamwe vavo vanorema. Zvishongo zvakanaka zvinofanirwa kubviswa mumuviri kusati kwatanga kuita basa rinonetesa (senge basa rekuvaka kana yemitambo yekubata) sezvavanogona kunamira pazvinhu zvekunze uye kubvarura. Zvishongo zvakaisvonaka zvishongedzo zvinofanirwawo kubviswa usati wageza sezvo makemikari akaomarara ari mukati meshampoos uye kusuka kunogona kukuvadza kana kutokuvadza zvishongo.
Inokurudzirwa zvikuru kuti zvishongo zvesirivha, kana zvisiri kushandiswa, zvichengetwe mukati mehombodo isina mweya kana mudziyo. Izvi zvinodzivirira sirivheri kubva kumakemikari anoita nezvezvakatipoteredza zvinhu (senge mhepo ine oxygen-ganda; acidic ganda) izvo zvingangoita kuti sirivheri isvibise uye irasikirwe nehunhu hwayo, hune pearly-chena.
Kutemesa zvimedu zvesirivheri zvakatorasika zvinogona kudzorerwa kumamiriro adzo nekukasira kuburikidza nemishonga yekuchenesa macomputer, senge iyo yatinopa. Bhati yekukurumidza makumi maviri nesere mune yekuchenesa inobvisa matara einosviba uye yakasviba kubva pasirivha.